Instagram inoshandura gumi muna 10. Yakatangwa munaGumiguru wa2020, uko chitoro chayo chekushandisa
debut zvakakurudzira 25,000 kurodha pasi muzuva rimwe chete. Makore maviri gare gare, Facebook yakatenga iyo app ye $ 1 bhiriyoni.
Muna 2020, iyo app yakura yakakura kupfuura zvaitarisirwa, ne Mamiriyoni mazana mashanu evashandisi vezuva nezuva. Kuzivikanwa kwayo kwakatungamira kuti ive sosi yemari yevanogadzira zvemukati uye zvigadzirwa pasi rese, vazhinji vachishandisa iyo sevhisi senge yavo chete sosi yemari.
Sezvo mukana wekuita mari, batanidza nevateereri vako, uye uvake zita rine mukurumbira pa Instagram rakanyanya, kunzwisisa mashandisiro aro kwakakosha. Ipo paine nzira dzakasiyana siyana dzeku musika wega kana bhizinesi rako pa Instagram, hazvigoneke kuzviita usina kutanga wanzwisisa yako Instagram yekubata chiyero.
Nei Instagram kubatanidzwa chiyero chine basa?
Instagram kubatanidzwa kwemitengo kwakakosha nekuti vanoyera kufarira kwevateereri, kukosha kwechiratidzo, uye masimba munharaunda.
Kana zvemukati zvako zvichikwezva kune vako vateereri, yako yekubata mwero ichave yakakwira. Kana iwe ukatora nguva yekudzokorora zvako zvakanaka kuita zvemukati, kureva, zvinyorwa zvine zvakanyanya kufarira, masheya, saves, uye makomendi, iwe unowana kunzwa kune izvo izvo vashandisi vako vaanoda kuona. Izvo zvakakosha kuti ucherechedze kukwirira kwekuratidzira kunogona kuratidza kuti zvemukati zvako zvakaonekwa zvakanyanya, asi kubatanidzwa kunowanzo kutsanangurwa sekudyidzana kwekongiri nezvako zvawatumira.
Kana iwe uine yakakwira yekubata mwero, zvingangoita kuti vateereri vako vanokuona iwe seyakakodzera sosi yeruzivo. Ivo vanogona kufarira zvako zvemukati pane vakwikwidzi nekuti zvako zvemukati zvinokugadzika iwe parutivi. Nekudaro, kana iwe uine yakakwira yekubata mwero izvozvi, zvichagara zvakafanana mumwedzi mitatu? Yakakwirira here kupfuura zvayaive gore rapfuura? Kana usiri kuongorora yako yekubata mwero uye kuishandisa sechiyero chekukosha, zvibodzwa zvako zvinogona kudzikira.
Paunenge uchinge watove yakaratidza yako yakatarwa instagram vateereri, hazvina kumbobvira zvakashata kuwedzera vateveri vatsva uye mafeni pane izvo zvinyorwa. Vashandisi vatsva ava vanozoona nezve kubatanidzwa kwako - vateveri vako, zvavanofarira, makomendi, nezvimwe - kusarudza kuti vatevere kana kwete. Ivo vanogona kuenda kumberi kune vako vanokwikwidza kana ivo vakaona yako brand kubatanidzwa, aka magariro masimba haana kusimba.
Ndeipi yepakati Instagram kubatanidzwa chiyero?
Iko hakuna-saizi-inokodzera-kwese kutsanangurwa kweiyo "yakanaka" chiyero chekubata. Ivo vanosiyana nemaindasitiri uye zvinoenderana nezvinangwa zvako zvine hungwaru.
Nekudaro, Instagram ine yakakwira yekubatanidzwa mitengo kupfuura mamwe enhau enhau. Zvinoenderana neHubSpot Instagram Engagement Chirevo, zvinyorwa papuratifomu zvinogadzira 23% yakawanda kubatikana kupfuura Facebook, kunyangwe Facebook iine 2x yakawanda vanoshandisa pamwedzi.
Kana iwe uchida huwandu hwenhamba kuenzanisa mamaki ako na, Rival IQ yakawanikwa kuti avhareji yekubata mwero pamabhizimusi ese ndeye 1.22%. Makambani akasarudzika ane akakwira mwero, sedzidzo yepamusoro ne3.57%, zvikwata zvemitambo zvine 2.33%, uye vanopesvedzera vane 1.67%.
Nekuda kweizvi, zvakachengeteka kufunga kuti chiyero chekubata cheinenge 1% chiyero chakanaka chekubata.
Kana iwe watomhanya manhamba uye ukaona kuti yako yekubata mwero yakadzikira zvakanyanya kupfuura avhareji, usanetseke. Pane nzvimbo yekuvandudza - asi chengetedza maonero ane hutano. Wongorora kuti chiyero chako chekubatana zvachinja sei nekufamba kwenguva uye wotanga kuronga marongero ekusimudzira mamaki ako. Tanga maitiro aya nekuverenga yako yekubata mwero.
Maitiro Ekuverengera Yako Kubatanidzwa Rate Pa Instagram
Pane gakava pakati pevashambadziri pane yakanakisa nzira yekuverenga yako Instagram yekubata mwero, sezvo akasiyana maindasitiri anotsanangura kubudirira munzira dzakasiyana. Maitiro ako aunofarira anoenderana nezvinangwa zvako sechiratidzo kana chinokurudzira.
Kuverenga Instagram kubatanidzwa chiyero chemhando
Iyi fomula yakanakira zvigadzirwa pa Instagram nekuti inofunga huwandu hwevanhu vakaona chidimbu chemukati (maficha) pane huwandu hwakazara hwevateveri.
Zvikwereti zvinowanzo shandura yakawanda inotungamira kuburikidza nekuratidzira kutanga, pane kutevera vateveri. Kana kushambadza kwakashambadzirwa kuchionekwa, mwero wekubatana unokwira, kunyanya kana vachitevera kushambadza kumaphrofayli e Instagram uye vova vateveri. Ziva kuti Instagram account dzinofanirwa kuve neruzhinji
Bhizinesi Profiles kuona maonero.
Kuverenga Instagram kubatanidzwa chiyero chevanokurudzira
Sezvo vatsigiri vachiwanzotora vanokurudzira pa Instagram zvichibva pane zvavanoda uye nemuteveri kuverenga, yavo yekudyidzana mitengo inosanganisira izvi zviviri zvinhu. Sezvo iyi metric isingade chero rako data, zvinokwanisika kuenzanisa yako yekubatanidzwa mitengo kune vanokwikwidza.
Kunyangwe yako chiyero chekubatana, pane nguva dzose matanho anotorwa kukwidza mamaki ako.
1. Chengetedza mabhenakeri asingachinji.
Kuchengetedza kuenderana nezvako zvemukati kwakanyanya kukosha, uye kune akasiyana zviito iwe aunotora kuti uite kudaro.
Kutanga, zita rako rekushandisa rinofanirwa kunge rakafanana kana rakafanana kune mamwe mazita ako enhau enhau. Semuenzaniso, kana yako twitter mubato uri @greenbookworm, yako Instagram mubato inofanira kunge yakafanana kana iripo (kana chimwe chinhu chakafanana).
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti zvemukati zviratidzike zvinoenderana futi, uye iwe unofanirwa kuve nefomati yaunoshandisa kune ako ese ezvinyorwa zvako. Tarisa uone Nike's Instagram, semuenzaniso.
Pese pavanotumira zvemukati zvinosanganisira typography, ivo vanoshandisa iwo akafanana mamiriro uye font. Kana vaisa mapikicha, vane mhando yepamusoro uye vanoshandisa firita imwe chete.
Kana zvemukati zvako zvine chitarisiko chakafanana, chimiro chako chinova chinonakidza, uye vashandisi vanogona kuziva ako mapikicha sechiratidzo chinowirirana. Kana vakasangana nezvako zvemukati pane imwe pasocial media saiti uye vakaona kuti ndeyako, vanogona kukutevera ipapo futi.
Pane data rekutsigira izvi - WebDam yakawanikwa iyo 60% yezvakanaka-kuita zvigadzirwa pa Instagram vaishandisa iyo imwechete firita nguva dzese dzavanotumira.
2. Nzwisisa vateereri vako.
Iwe haugone kutanga kugadzira zvemukati usingazive vateereri vako. Kugadzira Instagram vanhu chishandiso chinobatsira chekuwedzera chiyero chako chekubata. Kana iwe uchiziva kuti vateveri vako ndivanaani, kugadzira zvemukati zvavanoda zvinoita kuti vawedzere kusangana newe. Tora nguva yekutarisa zviverengero zvevateereri vako, uye gadzirisa yako manas zvinoenderana.
Unogona kushandisa Instagram Insights kuwana nzwisiso yehuwandu hwevateveri vako. Kana iwe uine Instagram bhizinesi account, enda kune vateereri tebhu kubva kuInsights menyu.
Kubva pano, iwe unogona kuona nzvimbo dzepamusorosoro dzinoshandiswa nevashandisi vako, mazera evashandisi vako, uye vakadzi. Zvese izvi ruzivo zvinokupa iwe kunzwisisa kwevashandisi vako.
Kana iwe uri mushandisi weHubSpot, unogona shandisa data reSocial Reports kuti uwane izvozvi zviono.
Zvisinei nevateereri vako, izvo zvirimo zvinofanirwa kuve kufambidzana. Kushandisa zvishandiso zvekuwanika zveAustralia kwakakosha, uye iwe unogona kuishandisa kuwedzera mufananidzo alt zvinyorwa, zvinyorwa zvidiki, uye zvinyorwa kune yako zvemukati.
3. Tumira nguva dzose.
Paunenge iwe uchinge waziva chako chakanangwa nevateereri, tumira zvemukati ivo vanonakirwa uye uzviite kazhinji Muna 2018, 60% yevashandisi ve Instagram vakashuma kushanyira saiti mazuva ese, uye 38% yeavo vashandisi yakashanya kakawanda pazuva.
Huwandu hwenguva dzaunotumira zvinoenderana neyako nzira yekutengesa, asi avhareji mhando zvigadzirwa 1.5 dzimwe nguva pazuva. Zvekare, iyi metric ndeyepakati, uye inogona kusashandira munhu wese. Kutumira zvakawandisa zvemukati zvinogona kukurira vashandisi vako, uye havazezeze kusateedzera kana chikafu chavo chakazara.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive iyo yakanakisa nguva yekutumira kune vateveri vako. Instagram Insights zvakare inokuudza iwe akanakisa mazuva uye maawa ekutumira.
Ramba uchifunga kuti huwandu hahuenzane nemhando, izvo zvinotisvitsa kune inotevera kubatanidzwa kusimudzira zano.
4. Gadzira zvinyorwa zviri nani.
Kunze kwekunge uri @neworld_record_egg, ndiani akatumira pikicha rezai na hapana chinyorwa iyo yakagadzira zvinopfuura mamirioni gumi nemaviri anodikanwa, iwe unofanirwa kutarisa pane ako macaption. Shandisa iyo izwi rechiratidzo iwe wakagadzira kurira kusingachinjiki uye chengeta vateereri vako vaunoda mupfungwa. Iwe unogona kugadzira zvinyorwa zvipfupi zvakakomba kana zvakapfava-moyo.
Iwe unogona zvakare kugadzira akareba zvinyorwa zvinotaurira nyaya uye tora vashandisi vako parwendo. Tora iyo instagram account @humanofny semuenzaniso. Ivo vanogara vaine nyaya dzevanhu dzepasirese.
Sezvo kusangana kwemetriki kuchikosha mukureba kwenguva iyo vashandisi vanoshandisa pazvinhu zvako, funga kuchinjanisa mapfupi uye akareba macaption.
Ruoko-mu-ruoko nekunyora zvirinani zvinyorwa zviri kushandisa unhu hashtags - Instagram yakavakirwa pavari, shure kwezvose. Iyo ichiri iyo algorithm yekutanga nzira yekusefa kuburikidza nezviri mukati. Kana iwe usina kujairana nema hashtag, heino a pfupiso.
Zvinyorwa zvinogona kubata kusvika makumi matatu hashtag pachipositi, asi panofanira kunge paine chiyero. Kurasa Hashtag, iyo yakafanana nekiyi yekukwirisa, inogona kuita kuti algorithm ifunge kuti urikukanganisa kusangana, uye iwe unogona kuva mumvuri wakarambidzwa. Chinangwa ndechekuziva izvo zvinoshanda kwauri uye nekuomerera pairi.
Ma hashtags ako anofanirwa kuve musanganiswa weakakurumbira uye akasarudzika, marefu-tailed keywords. Semuenzaniso, kana iwe uchimhanyisa iyo Instagram yehotera yako, iwe uchazoda kushandisa zvakajairika ma hashtag senge #hotel uye #travel. Nekudaro, izvo zvakare zvakakura kwazvo, sekutsvaga kwe #hotera tag ine mamirioni makumi matatu nemapfumbamwe. Nyatso tsanangudza uye tarisa kune zvaunoda, uye pamwe uti # hotera, #kufamba, uye # hotera + zita rako rehotera + zita reguta rauri. Saka, semuenzaniso, #hotellisamiami.
Iwe unogona kuwana akanakisa ma hashtag ekushandisa nekuita keyword research uye nekuisa mumapoka izvo zvinonyanya kushanda iwe neako brand. Iwe unogona zvakare kuda kufunga nezvekuuya neiyo brand-yakatarwa hashtag iyo vashandisi vanogona kuziva seyako.
5. Shingairira nevateveri vako.
Mushure mekutumira, ita nevateveri vako. Ipo Instagram iine iyo 'Dzima makomendi' chimiro, sarudza kuachengeta.
Pindura kumashoko ayo vateveri vako vanoita. Pamwe ivo vari kubvunza mibvunzo kana kuzivisa kwavo kufara kwechigadzirwa chako. Sarudzo yaPaula, mhando yerunako, muenzaniso wakanaka weizvi.
Ivo vanogara vachibatira Instagram Q & A's, uko vashandisi vanobvunza mibvunzo uye ivo vanoipindura pane yavo Instagram nyaya.
Vari kutora zviito zvavanoziva kuti zvinokwezva vateereri vavo kuti vataurirane nevo zvemukati zve Instagram, izvo zvinoita kuti zvive mubatanidzwa.
Kuita nevateveri vako kunosanganisira kugovana zvirimo pane yako saiti, inozivikanwa se user-generated content (UGC). Kuferefeta kuburikidza neyako brand-yakatarwa ma hashtag kunogona kukubatsira iwe kuwana vashandisi vari kutumira nezvako. Iwe unogona skrini yavo yezvinyorwa kuti ugovane pane yako nyaya, uye kunyange kutumira pane yako feed.
Vateveri vako vanozofara kuti iwe unofambidzana navo, sezvo kusangana kunogona kuratidza hukama hwehukama neako brand. Heano muenzaniso wePaula's Choice kutumira UGC.
6. Shingairira nemaakaundi akafanana.
Paisazove nepfungwa yekushandisa Instagram kana usiri kutevedzera nekudyidzana nemamwe maakaundi.
Kushandisa chikuva kuita nemaakaundi akafanana neako zvakakosha zvakanyanya. Kana iwe uri mucherechedzo, izvi zvinogona kureva kudyidzana nevanokurudzira mune imwechete indasitiri. Kana iwe ukagovana zvigadzirwa navo, ivo vanozotumira zvemukati vakapfeka zvigadzirwa zvako. Kana vakakumaka, vateveri vavo vanozoona account yako, uye vazhinji vanogona kukutevera-ese aya mametric factor mune yako yekubatanidzwa mwero.
Emma Chamberlain inozivikanwa YouTuber, inobata vangangoita mamirioni 10.4 evateveri ve Instagram pazera chete-makore-ekuberekwa. Anogara achitumira zvinotsigirwa zvemukati, uye vatsigiri vake vanomutumira Iye anokwezva vateveri vake kuti vadyidzane nemhando idzi, uye zvinopesana.
Izvi zvinosimbisa kuvimba pakati pemakemikari, vanokurudzira, uye vateveri vavo, izvo zvinopa pikicha ye 'kubatanidzwa kukuru' kune avo vanoongorora Instagram, uye vanokutevera mukudzoka.
Pamusoro pevanokurudzira, kungoita nemabhureki mukati mekambani yako kwakakoshawo. Kutaura nezvemaindasitiri-akajairika maakaundi anogona kukupa mukana kune vashandisi mune imwecheteyo chikamu chikamu, uye ivo vanogona kubaya yako mbiri uye vova vateveri vatsva.
7. Gadzira zvakasanganiswa zvemukati.
Kana iyo purogiramu yakatanga kuvhurwa, zvese iwe zvaungaite kutumira mapikicha. Ikozvino, kune mashanu marudzi ezvinyorwa zvinyorwa zvinotsigirwa pa Instagram: mifananidzo, mavhidhiyo, Instagram TV (IGTV), Instagram Reels, uye Instagram Nhau.
Hazvisisina kukwana kungoisa mafoto; iwe unofanirwa kuzviita zvese.
Zenith Media inofungidzira kuti munhu wepakati aigona kushandisa 84 maminetsi pazuva uchiona mavhidhiyo muna 2020. Iyo inguva yakakosha yenguva yakashandiswa kuona mavhidhiyo, saka shandisa icho kubatsira.
Pane mashanu mavhidhiyo sarudzo mukati me Instagram: Reels, IGTV, Nhau mavhidhiyo, Instagram Live, uye vhidhiyo zvinyorwa. Iwe unozofanirwa kusarudza kuti ndeipi nzira yakakunakira iwe, asi yakanyatso rongedzwa Instagram zano ichasanganisira ese. Kana vanhu vachiona zvirimo pane rako peji, ivo vari kushandisa yakawanda nguva pane yako saiti, kuumbiridza mune ako ekuona mwero.
Kana iwe uri mutambo wemitambo, tumira mavhidhiyo anokwezva evatambi vanozivikanwa vachishandisa zvishandiso zvako kudzidzira mutambo wavo.
Instagram Stories zvakangofanana zvakafanana nenyaya dzeSnapchat. HubSpot's Instagram kubatanidzwa mushumo vakawana 22% yevashandisi vakatarisa yakashongedzwa yezvinyorwa Nhau kubva kukambani, bhizinesi, kana brand kanopfuura kamwe pasvondo, uye 36% vakafarira, vakataura, kana vakagovana zvitoro zvine mazita.
Iwe unogona kutora mukana weaya manhamba uye shandisa chinhu ichi kukwevera kutarisa kune ako matsva matsva nekuvagovana paNhau yako kana kungoisa nyaya chete zvemukati.
Iyi ficha inogona zvakare kushandiswa kusangana nevateereri vako. Tumira mibvunzo uye mibvunzo uye ita kuti igoverwe kune vamwe vashandisi. Nhau dzinogona zvakare kushandiswa kuwana mhinduro kubva kune vatengi, muchivakumbira kuti vaendese zviitiko nezvako zvigadzirwa nemasevhisi.
Kutenderera kudzoka kunosimudzira kutsigira, kuvaita kuti vararame kuaccount yako kuburikidza ne Instagram Live zano rakakura. Instagram Live's inogona zvakare kuchengetedzwa kuaccount yako, saka vashandisi vatsva vanogona kuvatarisa kunyangwe zvikaitika mwedzi mitatu zvisati zvaitika.
8. Shandisa mafoni-kune-chiito (CTAs).
CTA chifananidzo, mutsetse wemavara, hashtag, kana swipe-up-chinongedzo icho chinorehwa kukwezva vateereri vako kuti vatore matanho - ndosaka kushevedzera-ku-chiito.
Icho chiito chaicho chauri kukumbira vashandisi kuti vatore chinofanirwa kusarudzwa zvichienderana neyako brand, sevhisi, kana zvinokurudzira zvevanoda. Izvi zvinogona kureva kuvazivisa nezvekutengesa nekusanganisira swipe kumusoro chinongedzo mune yako Instagram nyaya, uchivakumbira kuti vateme shamwari muchikamu chekutaura, kana kugovana zvinongedzo kune zvemukati-zvakatumirwa zvemukati.
Nepo zvinongedzo kune mamwe masaiti zvisingaite zvakananga yako Instagram yekubata chiyero, ivo vachiri kuda vashandisi kuti vashandise yakawanda nguva pane yako mbiri, uye iwe unogona kuvashandura ivo kuita anotungamira kune mamwe mapuratifomu. Heino muenzaniso we National Geographic kushambadza chigadzirwa chitsva pane yavo nyaya vachishandisa swipe-up CTA.
9. Chengetedza nhamba dzako.
Nei unganetseke kutora matanho ekuvandudza yako yekubata mwero kana usiri kutora iyo nguva yekunzwisisa kana iri kushanda? Kuongorora kufambira mberi kwako kwakakosha zvakanyanya, uye chinofanira kunge chiri chimwe chinhu chaunotarisa.
Kuedza uye kukanganisa kunotarisirwa, uye kunofanirwa kushandiswa kuzivisa maitiro ako azvino neramangwana. Shandisa zvaunofarira CRM kuwana zvinyorwa zvako zvinobudirira kana zvidimbu zvemukati, uye shandisa zano rakashandiswa mune idzodzo dzezvako zvinotevera zvinyorwa.
Mushure mekunge iwe waverenga yako yekubatanidzwa mwero kwenguva yekutanga, iwe unofanirwa kuronga mutsara wenguva iyo iwe yaunogona kuiverenga zvakare. Zvichida iwe uchaisa chinangwa chekusimudzira mamaki ako ne .10% mugore, saka unogona kuronga kuverenga zvekare manhamba mwedzi mitatu. Izvi zvinogona zvakare kubatsira iwe kuti unzwisise izvo zvisiri kushanda - kana nhamba dzako dzisina kubhururuka, chimwe chinhu chinofanira kuchinja.
Zvese mune zvese, Instagram kubatanidzwa chiyero chiyero chekuti vateereri vako vanofambidzana sei nezvako zvemukati. Chiyero chako chiratidzo cheako ma profiles e Instagram 'masimba masimba, kukosha, uye kufarira kwevateereri.
Kana zvirimo zvakanaka uye vateveri vako vari kuita, yako yekubata mwero inoratidza izvo. Paunopedza nguva uchishanda pane yako chiyero chekuita, iwe unotora data rakakosha kuzivisa yako yese Instagram kushambadzira zano.
Iwe unofanirwa kuona yako yekutengesa mwero sechiyero chekuvimbika kwevatengi uye kugutsikana.
Kana vashandisi vako vachikuda, zvicharatidza.
Sei & Mashandisiro Ekushandisa Instagram Shopping Kuti uwedzere Bhizinesi Rako Rwepamhepo
18 Instagram Apps Kuita Kuti Zvako Zvimire Zvimire
Nzira Yokufambisa Kutengeswa Neiyi 11 Instagram Marketing Strategies
20 Hidden Instagram Hacks uye Zvimwe Munhu Wose Anofanira Kuziva Nezve
6 yenzira dzakanakisa dzeAuto Tweet Iyo Inodzivirira Spamming Twitter